Troy (2004) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
R 2004 163 min Drama, History
ငယျငယျက သမိုငျးစာအုပျထဲမှာ သငျကတညျးက ထငျကနျြမှတျမိခဲ့တဲ့ ဂရိတို့ရဲ့ ဂန်ဓဝငျမွောကျ “ထရိုငျ” မဟာစဈပှဲကွီး အကွောငျးရိုကျထားတဲ့ ဇတျကား….. အခဈြ အကွမျး အရမျး အလှမျး ရသစုံလငျတဲ့ ဇတျကားကောငျးလေးပါ…..တျောတျောမြားမြားကွညျ့ဖူးပွီးသားဖွဈပမေဲ့ မွနျမာစာတနျးထိုး ဗားရှငျး နဲ့ပွနျလညျခံစား ရစဖေို့ တငျဆကျလိုကျပါတယျ…. မိသားစုတှအေတူတကှကွညျ့ရှုနိုငျပါတယျ။ Credit Review
ငယ်ငယ်က သမိုင်းစာအုပ်ထဲမှာ သင်ကတည်းက ထင်ကျန်မှတ်မိခဲ့တဲ့ ဂရိတို့ရဲ့ ဂန္ဓဝင်မြောက် “ထရိုင်” မဟာစစ်ပွဲကြီး အကြောင်းရိုက်ထားတဲ့ ဇတ်ကား….. အချစ် အကြမ်း အရမ်း အလွမ်း ရသစုံလင်တဲ့ ဇတ်ကားကောင်းလေးပါ…..တော်တော်များများကြည့်ဖူးပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့ မြန်မာစာတန်းထိုး ဗားရှင်း နဲ့ပြန်လည်ခံစား ရစေဖို့ တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်…. မိသားစုတွေအတူတကွကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Credit Review
Option 1 storage.msubmovie.com 923 MB SD (480p)
Option2megaup.net 923 MB SD (480p)
Option3yuudrive.me 923 MB SD (480p)
Option4sharer.pw 923 MB SD (480p)
Option5storage.msubmovie.com 2.2 GB HD (1080p)
Option6megaup.net 2.2 GB HD (1080p)
Option7yuudrive.me 2.2 GB HD (1080p)
Option 8 sharer.pw 2.2 GB HD (1080p)
Option9usersdrive.com 5.4 GB FHD (1080p) DTS-HDMA 5.1
Option 10 storage.msubmovie.com 5.4 GB FHD (1080p) DTS-HDMA 5.1
Option 11 yuudrive.me 5.4 GB FHD (1080p) DTS-HDMA 5.1
Option 12 sharer.pw 5.4 GB FHD (1080p) DTS-HDMA 5.1